जाडाेमा बाँसकाे तामा खानुपर्ने रहेछ । किन र कसरी खाने ? स‍ेयर गरि याे जानकारी सबै माज पुर्याउनुहाेला - ज्ञानविज्ञान
जाडाेमा बाँसकाे तामा खानुपर्ने रहेछ । किन र कसरी खाने ? स‍ेयर गरि याे जानकारी सबै माज पुर्याउनुहाेला
बाँसको तामा, हाम्रो रैथाने परिकार हाे । हुन त अहिले यसको सिजन होइन । यद्यपी जाडो याममा बाँसको तामाको परिवार निकै उपयोगी हुन्छ । बाँसको तामा मानव स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसलाई अचार, तरकारी वा सुपको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियामा बाँसको तामाको प्रचलन छ ।
नेपालमा तामाको परिकार सिमित छन् । नेपालमा आलु बोडी तामाको तरकारी निकै प्रचलित छ । तामाको अमिलो अचार अर्थात तामाको मेसो पनि त्यतिकै लाेकप्रिय छ ।
बाँसको तामा क्यालोरी पनि न्युन हुन्छ । त्यसैले तौल घटाउन चाहनेहरुको लागि पनि यसले फाइदा पुर्‍याउँछ ।
यसले ग्यास्टि्रक र अल्सरलाई निको पार्नमा भुमिका निर्वाह गर्छ । नियमित तामाको सेवनले क्यानसरको सम्भावनालाईसमेत कम गर्छ ।
चीनमा पनि बाँसको तामा निकै प्रचलित छ । त्यहाँ त बासको तामा मात्र नभै पात पनि बिभिन्न हर्बल-टिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । जुन स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
यस्ता छन् ताताे पानी पिउनुका १० फाइदाहरू
जाडाे माैसममा शरीरबाट पसिना कम निस्किने भएकाले पानी थाेरै खाने गरिन्छ । जाडाेमा हामी शरीरलार्इ अावश्यक पर्ने मात्रामा पानी खान पनि चुकिरहेका हुन्छाैँ । यस्ताेमा ताताे पानी खाने बानी बसाले बढी मात्रामा पानी खाइन्छ ।
यस्ता छन् ताताे पानी पिउनुका फाइदाहरू
१.थकान महसुस भएमा ताताे पानीले नुहाउँदा थकान हट्छ ।
२.ताताे पानीमा अलिकति गुलाबजल मिसाएर नुहाउनाले छाला राम्राे हुनुका साथै जीउ दुखेकाे पनि सन्चाे हुन्छ ।
३.लुताेलगायत छालासम्बन्धी समस्या भएका मानिसले ताताे पानीले नुहाउनु उपयूतत्त मानिन्छ ।
४.ताताे पानी खानाले शरीरमा रक्तसञ्चार सुन्तुलित रहन्छ ।
५.ताताे पानीमा कागतीकाे रस र मह मिसाएर बिहान पिउने गर्नाले राेगसँग लड्ने क्षमताकाे विकास हुन्छ ।
६.बिहान उठेर ताताे पानी पिउनाले दिसा खलास हुन्छ जसले गर्दा कब्जियतकाे समस्या रहन पाउँदैन् ।
७.श्वासप्रश्ववास र किड्रनीसम्बन्धी समस्या भएकाहरूले चिसाे पानीकाे सट्टा मनताताे पानी पिउने हुनुपर्छ । यस्ताे समस्या भएका हरूले चिसाे पानी खाएमा किड्नी र फाेक्साे बढी उत्तेजित हुने भएकाले समस्या आउन सक्छ ।
८.ताताे पानी पिउनाले हड्डी र जाेर्नीसम्बन्धी समस्याबाट पनि राहत मिल्छ ।
९. मनताताे पानीले जाेर्नीमा घर्षण कम गर्नाले भविकष्यमा बाथराेग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
१०.चिसाे माैसममा ताताे पानी पिउनाले रूघा खाेकीलगायत समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
Don't Miss it डेंगू र मलेरिया देखि अन्य थुप्रै राेगहरुसँग लड्नमा मेवाको पातको जूस धेरै नै लाभकारी: यसप्रकार छन् फाइदाहरु
Up Next खानामा ‘अजिनोमोटो’को प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य सखाफ बनाउने रहेछ । यस्ता परिकारबाट टाडा बस्नुनै उचित: सबैले पढाै एकचाेटि